I-WhatsApp iza kwazisa imo emnyama kungekudala | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izaziso, Whatsapp
Sibona indlela imowudi emnyama eqhubela phambili ngesantya esikhulu kwi-Android. UGoogle wazisa le ndlela kuninzi lwezicelo zayo kwezi nyanga zidlulileyo. Kodwa ayisiyiyo inkampani kuphela, ukusukela oko ezinye izicelo ziyasebenza kule ndlela, phakathi kwazo yi-WhatsApp. Inkqubo yemiyalezo edumileyo iceba ukwazisa ngale ndlela.
Ukususela idatha ifika ichaza ukuba i-WhatsApp sele iqalile ukuvavanya ngemowudi yasebusuku okanye kwimowudi emnyama. Elinye inyathelo ngaphambi kwale modeli yaziswa ngokusesikweni kwisicelo sokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza. Into ekungafanelekanga ukuba ithathe ixesha elide.
Izalathiso sele zifunyenwe kwikhowudi yesicelo ezenza kucace ukuba indlela emnyama izakwaziswa. Kwaye inyani yokuba iimvavanyo zokuqala sele ziqhubeka iyakuqinisekisa oku. Esinye isicelo esongeza kolu luhlu kwi-Android.
Nangona okwangoku akukho mhla unikiweyo wokungeniswa kwendlela emnyama kwiWhatsApp. Akufanele kuthathe ixesha elide ukuqaphela ukuba le nkqubo ibonakala iqhuba kakuhle. Asinayo nayiphi na imifanekiso malunga nokuba le modeli iya kujongeka njani kwisicelo esibonakalayo.
I-WhatsApp ijoyina indlela emnyama, nangona kuyothusa ukuba isicelo sithathe ixesha elide. Ukusukela ezinye usetyenziso kwi-Android bezisebenzisa le ndlela iinyanga. Nangona isicelo semiyalezo sihamba kancinci kancinci. Kulindeleke ukuba ibe ilungile phambi kokuphela kwalo nyaka.
Sinokulinda kuphela vumela i-WhatsApp ngokwayo inikezele ngolwazi oluthe kratya malunga nokufika kwale ndlela imnyama. Mhlawumbi kwiiveki ezimbalwa siza kuba nedatha engaphezulu, okanye umfanekiso wokuqala wayo. Ke siya kugxila kwidatha engaphezulu. Ucinga ntoni ngokufika kwendlela yasebusuku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-WhatsApp sele isebenza ekwazisweni kwemowudi emnyama
Yintoni kwaye yintoni imowudi ye-HDR yekhamera yakho?